ग्रीसमा वामपन्थी सरकार गठनः अगाडि ठूल्ठूला चुनौती
युरोपेली राष्ट्र ग्रीसमा गत आइतबार जनवरी २६ का दिन संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन परिणामले त्यहाँको वामपन्थी पार्टी–सिरिजाले जित हासिल गर्‍यो। क्रान्तिकारी वामपन्थीहरूको मोर्चाका रुपमा अगाडि आएको सिरिजा ९त्जभ ऋयबष्तिष्यल या च्बमष्अब िीभात या न्चभभअभ–क्थ्च्क्ष्श्ब्० पार्टीको विजय अप्रत्याशित नभए पनि त्यसले ग्रीसको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ मोड ल्याएको छ। निर्वाचनमा ३६ प्रतिशत मत हासिल गरी ३०० स्थानको ग्रीसेली संसदको १४९ सिटमा सिरिजाले विजय हासिल गर्‍यो।
निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि सिरिजा पार्टीका नेता ४० वर्षीय अलेक्सिस सिप्रास ९ब्भिहष्क त्कष्उचबक० ले सोमबार नै ग्रीसको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो। आफ्नो पार्टी एक्लैको संसदीय सिटले बहुमत नपुगेपछि नेता सिप्रासले अर्काे एक सानो ग्रीसेली राष्ट्रवादी पार्टी– इन्डेपेण्डेन्ट ग्रीक्ससँग गठबन्धन गरी सरकार बनाएको छ। ग्रीसमा कम्युनिष्ट विचारधाराको पार्टीले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने नेता सिप्रास ग्रीसको गत १५० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभएको छ।
युरोपमै वामपन्थी पार्टीको निर्वाचनमा विजय र सरकार गठनलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले अप्रत्याशित, आश्यर्च र एकाएक भएको घटनाका रुपमा प्रचार गर्‍यो, गर्दैछ। तर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्रचार गरेजस्तो सिरिजा पार्टी एकाएक ठूलो पार्टीका रुपमा उदाएको या चम्केको होइन। निश्चय नै सन् २००४ मा मोर्चाको रुपमा जन्म भएको सिरिजा पार्टीको इतिहास छोटो छ तर यसमा आबद्ध भएका १३ वटा पार्टी या समूहहरू निकै लामो समय अघिदेखि ग्रीसमा सक्रिय थिए। वर्तमान सिरिजा पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी, वामपन्थी, जनवादी, वामपन्थी हरियालीवादी, माओवादी, ट्रट्स्कीपन्थी, युरो कम्युनिष्ट र युरो केन्द्रवादीहरूको समेत बृहत मोर्चा मानिन्छ।
सन् २००२ मा विभिन्न विषय र मुद्दामा समान धारणा भएका विचारधारा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भिन्न भएका तर छुट्टाछुट्टै गतिविधि गरिरहेका दलहरूले स्पेस ९क्उबअभ० नामक एक मञ्च बनाएका थिए। उक्त मञ्च ती दलहरूबीच आन्दोलनको निम्ति कार्यगत एकताका लागि थियो। सन् २००४ मा निर्वाचनमा संयुक्त रुपमा चुनावमा भाग लिने उद्देश्यले औपचारिक रुपमा 'संयुक्त मोर्चा' गठन गरिएको थियो। अलेकोस अलाभानोसको नेतृत्वमा त्यसरी 'संयुक्त मोर्चा' बनाएर जाँदा मोर्चाले ३.३ प्रतिशतमात्र सुरक्षित गर्दै ६ जनालाई मात्र संसदमा पठाउन सफल भएको थियो। ती ६ जना संयुक्त मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी सीनास्पिस्मोसका थिए। त्यसले मोर्चाभित्र तनाव बढाएको थियो र इन्टरनेश्नलिष्ट वर्कर्स लेफ्ट ९क्ष्लतभचलबतष्यलब िध्यपभचक ीभात० भन्ने पार्टी मोर्चाब्ााट छुट्टिएर गएको थियो।
सन् २००६ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मोर्चाको उम्मेदवार ३० वर्षीय अलेक्सिस सिप्रास (वर्तमान प्रम) ले एथेन्स नगरपालिकाको मेयरमा विजय हासिल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै १६ सेप्टेम्बर २००७ मा भएको ग्रीसको संसदीय निर्वाचनमा ५.०४ प्रतिशत मत हासिल गर्‍यो।
२७ नोभेम्बर २००७ का मोर्चाका अध्यक्ष अलेकोस अलाभानोसले व्यक्ति कारणले सीनास्पिस्योस पार्टीको अध्यक्षमा पुनः नउठ्ने घोषणा गर्नुभयो। सीनास्पिसकोस पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनले ३३ वर्षीय अलेक्सिस सिप्रासलाई अध्यक्ष चयन गर्‍यो र मोर्चाको पनि अध्यक्ष बन्नुभयो। सिप्रासले संयुक्त मोर्चा अर्थात् सिरिजालाई लोकप्रिय बनाउनुभयो।
जुन २००८ मा सेकिनिमा ९ह्भपष्लष््कब० भन्ने अर्को पार्टी पनि मोर्चामा आबद्ध भयो। २००९ मा भएको युरोपेली संसदको निर्वाचनमा मोर्चा आफ्ना एक उम्मेदवार निकोस होन्टिसलाई युरोपेली संसदको सदस्यमा निर्वाचित गर्न सफल भयो। त्यस्तै अक्टोवर २००९ मा सम्पन्न ग्रीसेली संसदीय निर्वाचनमा ४.६ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १३ जना सदस्यलाई संसदमा पढाउनल सफल भएको थियो।
२० जून २००७ मा ग्रीसेली कम्युनिष्ट सङ्गठन ९प्इभ्० मोर्चामा आबद्ध भयो भने २२ अगस्ट २००७ मा प्रजातान्त्रिक सामाजिक आन्दोलन ९म्क्ष्प्प्क्ष्० पनि संयुक्त मोर्चामा सामेल भयो।
निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै ग्रीसमा सार्वजनिक सेवाको बजेट कटौतीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी सिरिजाले गठबन्धन सरकार गठन गर्ने निर्णय लियो र आर्थिक कटौतीको विरोध गरिरहेको अर्काे सानो पार्टी इण्डेपेन्डेन्ट ग्रीक्सका नेता पानोस कामेनोससित सिप्रासले भेट गर्नुभयो। ती दुई नेताको भेटवार्टाबाट गठबन्धन सरकार गठनको बाटो खुल्यो, सिप्रासले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै कोमेनोसले प्रतिरक्षामन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै वामपन्थी अर्थशास्त्री तथा लेखक यानिस भारुफाकिस ग्रीसका नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्। सरकारको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको बजेट कटौतीको विरोधमा निरन्तर वकालत गरिरहनुभएका अर्थशास्त्री भारुफाकिस अर्थमन्त्रीमा नियुक्तिले ग्रीसको सरकारको अर्थनीतिमा ठूलै परिवर्तन आउने अनुमान गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमानलाई सही ठहर्‍याउँदै ग्रीसको नयाँ वामपन्थी सरकारले निजीकरणको नीतिलाई त्याग्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको बजेट कटौती कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको यस निर्णयसँगै ग्रीसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरू र देशका पूँजीपतिहरूसित सङ्घर्षको अवस्थामा उभ्याएको छ। ग्रीसको नयाँ सरकारले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले लिइराखेका विदेशी ऋण तिर्ने या नतिर्ने अहिलेसम्म केही बताएको छैन तर सरकारले ऋण नतिर्ने निर्णय लिएमा ग्रीस युरोपेली सङ्घबाट निष्काशित हुने निश्चितझैं देखिएको छ। ग्रीसको वित्तीय बजारमा शेयरको मूल्यमा गिरावट आएको मात्र छैन यसैकारण युरोको मूल्य केही समय डलरको तुलनामा गत ११ वर्षमा सबैभन्दा बढी तल झरेको देखिएको छ। युरोपका पूँजीपति वर्ग, युरो बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेतृत्व राष्ट्रका नेता र कर्मचारीहरूको निन्द्रा हराएको छ। ग्रीसको राजनीतिमा आएको अप्रत्याशित परिवर्तनलाई कसरी लिने भनी उनीहरूले निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् तर तिनीहरूको कथित 'चिन्ता जाहेर' बाट ग्रीसको वामपन्थी सरकार तिनीहरूको रोजाइ होइन भन्ने तथ्य छर्लङ्ग पार्छ।
नोभेम्बर २०११ मा लुकास पापाडेमोस सरकारले लिएको कटौतीको नीति र अगाडि बढाएको कथित मितव्यायिताको योजनाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा सिरिजा, ग्रीसेली कम्युनिष्ट पार्टी ९प्प्भ्० र प्रजातान्त्रिक वामपन्थी पार्टीले बढी लोकप्रियता कमाएका थिए। सत्ताधारी पार्टी पासोक ९एब्क्इप्० बाट छुट्टिएर आएको युनिटरी मुभमेन्ट समूहलाई पनि मार्च २०११ मा सिरिजामै विलय गरिएको थियो।
जून २०१२ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा २७ प्रतिशत मत हासिल गरी सिरिजा पार्टी ग्रीसको दोस्रो ठूलो पार्टी बन्यो। जुन मत सबैभन्दा ठूलो सत्ताधारी पार्टीको भन्दा २.८ प्रतिशतमात्र कम थियो। संसदमा ७१ सिटका साथ सिरिजा प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी बन्यो।
जुलाई २०१३ मा सिरिजा मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो र संगठनका विविध पक्षबारे छलफल भयो। सम्मेलनले मोर्चामा आबद्ध सबै पार्टीहरूलाई एउटै एकीकृत पार्टीमा विलय गर्‍यो। ३८ वर्षीय अलेक्सिस सिप्रास नै पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता चुनिनुभयो।
मई २०१४ मा सम्पन्न युरोपेली संसदको निर्वाचनमा सिरिजा पार्टीले कूल खसेको मतको २६.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो भने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एथेन्सलगायत विभिन्न नगरपालिकाको प्रमुख र सदस्य पदहरूमा अत्याधिक मतका साथ आफ्ना सदस्यहरू निर्वाचित गराउन सफलता हासिल गर्‍यो।
सेप्टेम्बर २०१४ मा सिरिजा पार्टीले देशको आर्थिक र राजनीतिक पुनर्संरचनाबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा र मागसहितको 'थेस्सालोनिकी कार्यक्रम' ९त्जभककबयिलष्पष् एचयनचब्क्कभ० घोषणा गर्‍यो। यसले पार्टीको लोकप्रियता जनतामाझ अझ बढ्यो।
युरोपेली सङ्घ, संरा अमेरिकालगायत धेरै पूँजीवादी देशका सरकारहरूको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री एन्टोनिस समारासको सरकार ग्रीसमा थियो। सार्वजनिक सेवाको बजेट कटौती र ऋणदाताहरूको शर्त अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न तत्पर समारासको सरकार संसदमार्फत नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न असफल भयो। आफ्नो प्रस्ताव असफल भएपछि २९ डिसेम्बर २०१४ का दिन समारास सरकारले संसद विघटन गरी २५ जनवरी २०१५ को नयाँ संसदको घोषणा गरेको थियो।
हालसम्म युरोपेली सङ्घ, युरोपेली केन्द्रिय बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसित ग्रीसले २४० अर्ब युरोभन्दा बढी ऋण लिइसकेको अवस्था छ। ती ऋणदाताहरूको सर्तमा आर्थिक नीति निर्माण गरी लागू गर्नु ग्रीसको पहिलो प्राथमिकता बन्दै आएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री सिप्रासले ती शर्तलाई निरन्तरता नदिने र ऋणदाताहरूसँग पुनः वार्ता गर्ने बताइरहनुभएको छ। के प्रधानमन्त्री सिप्रासको सरकार र ऋणदाताहरूबीच नयाँ सम्झौता हुन सक्ला? सम्झौता भएन भने के होला? के विदेशी ऋणविना पनि ग्रीसको अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन सक्ला? नयाँ वामपन्थी सरकारले के उपाय लगाउला? सर्वत्र जिज्ञासा र चर्चाको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री सिप्रासले ग्रीस अब विपत्तिजनक सार्वजनिक सेवाको बजेट कटौती योजनाबाट बाहिरिने बताउनुभएको छ। प्रम सिप्रासले ऋणदाताहरूसँग भएको सम्झौतामा प्रावधान निहित रहेको निजीकरणलाई रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूलाई खुला चुनौती दिनुभएको छ।
बुधबार आफ्नो सरकारको पहिलो क्याविनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री सिप्रासले कथित कटौती कार्यक्रमले जीवनस्तर अत्यन्तै खस्किसकेका आफ्ना मतदाता जनतालाई थप निराश पार्न नसकिने बताउनुभयो।
'हामी यस देशले लागू गरिरहेको नीति र सञ्चालन गरिरहेको प्रशासनमा ठोस् परिवर्तन गर्न आएका हौं। हाम्रा प्राथमिकता हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा बल पुर्‍याउनु र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्षम बनाउनु हो। हामी हाम्रो ऋण घटाउन तथा सही र सहज समाधान प्राप्त गर्न हाम्रा साझेदारहरूसँग पुनः वार्ता गर्न तयार छौं।' – उहाँको भनाइ थियो।
कयौं बुँदाको आफ्नो पहिलो घोषणामार्फत नयाँ सरकारले आफ्नो कटौतीविरोधी वाचामा अडिग रुपमा उभिने सङ्केत देखाएको छ। सरकारले त्यस देशको सार्वजनिक विद्युत संस्थानको शेयर बिक्री र हेलेनिक पेट्रोलियमको निजीकरण प्रक्रियालाई पूर्णतया रोक्न भनेको छ। विद्युतको ग्रीड लाइन, हवाई अड्डा र स्थल मार्ग यातायातको सम्पति बिक्रीलाई पनि रोक्न भनेको छ।
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थानका कर्मचारी र मजदुरहरूलाई फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेको छ। कर्मचारी र मजदुर कटौतीले ग्रीसेली जनताले ठूलो दुःख पाएका छन्। त्यसरी फिर्ता बोलाइएकामा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको समूह पनि परेको छ, जो गत वर्षको बजेटबाट निष्काशित भएका थिए। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरू र कम आय भएकाहरूको निवृत्तिभरण (पेन्सन) बढाउने घोषणा गरेको छ।
नयाँ सरकारको पहिलो क्याविनेट बैठकको निर्णहरूबारे जानकारी दिंदै या नयाँ सार्वजनिक प्रशासन उपमन्त्री जर्ज कात्रोगालोस ९न्भयचनभ प्बतचयगनबयिक० ले भन्नुभयो: निश्चय नै यी सुधार हुन्। तर देशलाई सुधारमात्र आवश्यक होइन, सिमानाभन्दा बाहिरबाट निर्देशित सुधारको अन्त्य आवश्यक छ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनर्थालनी गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो प्रजातन्त्रको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ। यो निकै ठूलो चुनौती हो, जुन हाम्रो सामुन्ने छ।'
के सिरिजा पार्टी र नयाँ ग्रीसेली सरकारलाई यसरी अगाडि बढ्न दिइएला? ग्रीसका दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र कर्मचारीतन्त्र चुपचाप बस्लान्? विश्व पूँजीवादका नाइके संरा अमेरिका र युरोपेली सङ्घ हात बाँधेर बस्ला? नयाँ प्रधानमन्त्री सिप्रासलाई फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्कोइस ओलाण्डलगायत कयौं पूँजीवादी देशका उनका समकक्षीहरूबाट औपचारिक रुपमा बधाइ त आएका छन् तर के तिनीहरू सिप्रास सरकारको पूँजीवादविरोधी निर्णय कार्यान्वयनलाई हेरेर चुपचाप बस्लान्? निश्चय नै बस्ने छैनन्। त्यसको पहिलो सङ्केत जर्मन सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारी हान्स पिटर फ्रेडरिकले दिइसकेका छन्। उनी भन्छन्:'आफूले चाहेकोलाई मत दिने र सरकारमा पुर्‍याउने अधिकार ग्रिसेलीहरूलाई छ। ग्रीसेली ऋणमा थप लगानी नगर्ने अधिकार हामीलाई छ।'
ग्रीसको वामपन्थी सरकारका सामु ठूल्ठूला चुनौतीहरू छन्। युरोपेली सङ्घ, छिमेकी देशहरू र संरा अमेरिकासित सम्बन्ध बनाइराख्नु सिप्रास नेतृत्वको नयाँ सरकार सामु रहेको अर्काे चुनौती हो। सिरिजा पार्टीको साम्राज्यवादविरोधी, पूँजीवादविरोधी र देशभक्तिपूर्ण सिद्धान्त र नीति नै सरकारले पूर्णतया लागू गर्न खोजेमा ग्रीसको नयाँ सरकारलाई छिट्टै नै पूँजीवादी सञ्चारमाध्यमहरूले दानवीकरण गर्नेछन् र सरकारको विरोधमा देशभक्ति र बाहिर जनमत सिर्जना गर्न खोज्नेछन्। नयाँ सरकारले कूटनीतिक सक्रियता बढाएर त्यसलाई निष्प्रभावी पार्न सक्नुपर्नेछ।
ग्रीसलाई युरोपेली सङ्घमा आबद्ध गरिराख्नु सिरिजाको अर्काे चुनौती हुनेछ। हुन त सिरिजा पार्टीमा युरोप केन्द्रवादी विचारको कमैमात्र प्रभाव छ तर पनि ग्रीसलाई युरोपेली सङ्घमा राखिराख्नु उसको बाध्यता छ। ग्रीस युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिएमा त्यसको परिणाम ग्रीसको मुद्रास्पि्कति अत्यन्तै बढ्नेछ, त्यहाँ इन्धनको सङ्कट हुनेछ र अर्थतन्त्रले ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। त्यसले लगानीकर्ताहरू बाहिरिने क्रमलाई बढाउनेछ, रोजगारीको थप कटौती हुनेछ। त्यसले नयाँ सरकार आफैले ग्रीसलाई युरोपेली सङ्घबाट बाहिर निकाल्ने कार्य नगर्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ। तर, युरोपेली बैङ्कका हर्ताकर्ताहरूसित ऋणका बारे मोलमोलाइ गरेर, असहमत भएर पुरोपेली सङ्घका नै रहिरहनु वामपन्थी सरकारको निम्ति थप चुनौती हुनेछ।
सिरिजा पार्टीसित पूर्ण बहुमत नभएकोले गठबन्धनमा आएको 'इन्डेपेन्डेन्ट ग्रीक्स'लाई विपक्षीहरूले भड्काउन खोज्नेछन्। सिरिजाले आफ्नो विचार र नीतिसित सहमत हुनसक्ने ग्रीसेली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत अन्य साना पार्टीहरूसित पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ। यसमा चुकेमा छिट्टै नै सरकारले संसदमा। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्नेछ।
सिरिजा पार्टी आफै पनि एउटा एकीकृत पार्टीभन्दा विभिन्न पार्टीहरूको गठबन्धन या मोर्चा भएकोले मोर्चामा रहेको सबै विचार समूहहरूलाई सन्तुष्ट राख्नुपर्ने विचार छ। पार्टीभित्र र जनतासँग निरन्तर सम्वाद र अन्तरक्रिया गरिराख्न सकेमात्र नयाँ वामपन्थी सरकार आफ्नो एकतालाई कायम राख्दै जनमत आफ्नो पक्षमा राखिरहन सक्षम हुनेछ।
–स्रोतः विभिन्न सञ्चारमाध्यम
कोरिया प्रायःद्वीपको शान्तिमा मुख्य बाधक– संरा अमेरिका
'द नर्थस्टार कम्पास' को सम्पादकीय लेख वाशिङ्गटन किन रुससँग युद्धको खतरा मोल्दैछ?
फ्रान्सेली पत्रिका चार्र्ली हेब्दो कार्यालयमा आक्रमण: १२ को हत्या
ग्वान्टानामो बन्दीगृह बन्द गर र भूमि क्युवालाई फिर्ता गर
'चिनियाँ शताब्दी' होइन, कम पश्चिमाकरण गरिएको विश्व
वाशिङ्टनले रुसलाई ध्वस्त पार्ने योजना गर्दैछ
वाशिङ्टनले आफ्नो ठूलो भूराजनीतिक खेलमा युक्रेनलाई प्यादाको रुपमा प्रयोग गर्‍यो – रुसी राजनीतिज्ञ
प्रजग कोरियाद्वारा साइबर हमला आरोपको खण्डन